Indlu yehlathi lasePaju
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguAnu
Indlu yamaplanga yaseSpartan kuphela iikhilomitha ezimbalwa ukusuka e-Estonia enkulu kunye neyona ndala yePaki yeSizwe iLahemaa kunye neKõrvemaa Nature Reserve. Ilungele abantu abaxabisa uxolo kunye nexesha elizolileyo kwindalo yasendle.
I-Paju Forest hut ikwindawo yepropathi yamandulo yase-Estonia. Isalathiso sokuqala esibhaliweyo sokungqonge indawo yefama yasePaju sisusela kwinkulungwane ye-13, le ndlu inkulu yaqala ukukhankanywa ngo-1734. Imi kwilali encinci yasehlathini ebizwa ngokuba yiHirvli, iikhilomitha ezimbalwa kuphela ukusuka e-Estonia enkulu kunye nendala yePaki yeSizwe iLahemaa kunye neKõrvemaa Nature. Gcina. Iikhilomitha ezingama-46 ukusuka eTallinn, iikhilomitha ezingama-54 ukusuka eRakvere.
Iindawo ezintle ze-bog, amahlathi atyebileyo ezilwanyana kunye neentaka, ama-wildberries, amakhowa. Uninzi lweempawu zembali - iindawo ezininzi zokukhenketha ezinokundwendwelwa, ukufumanisa indalo engekachukunyiswa kunye nelifa lemveli elityebileyo lendawo. Ukurhoxa ngokugqibeleleyo kwingxolo yesixeko.
Okwangoku sinikezela ngendawo yokuhlala kwindlu encinci yeplanga ye-spartan, kubantu abakhulu be-2. Incinci kakhulu, ubungakanani begumbi malunga ne-9 m2. I-Paju Forest hut ifanelekile kubantu abaxabisa uxolo kunye nexesha elizolileyo kwindalo yasendle. I-Hut ijikelezwe ngumlambo omncinci, i-pool kunye nemithi, ngokujonga amahlathi kunye namasimi.
Indawo yokulala iphantsi (i-matress ye-2, i-bedlinen, imithwalo). Ukusela amanzi aphuma emlanjeni, kwiziko elingaphandle (iinkuni, ukupheka kunye nezixhobo zokutya zibandakanyiwe), indlu yangasese eyomileyo. Kukho umbane wokufudumeza kodwa endaweni yoko siyakucebisa ukuba wonwabele umlilo wenkampu kunye nekhandlela (amakhandlela aqukiwe).
Indlu enkulu yefama yasePaju likhaya losapho olunye. Indlu yehlathi ikude ngokwaneleyo kwindlu yethu ukuze ube nemfihlo kodwa sisondele kwaye sikhuselekile xa kukho into oyifunayo.
Sincoma ukuza ubuncinane ubusuku obu-2 ukuze ufumane amava apheleleyo!